Siyabonga Ubuhle Babangani! | Martech Zone
Siyabonga Ubuhle Babangani!
NgoMsombuluko, Agasti 4, 2008 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Kulabo kini abaqaphele ukuthi nginyamalale enethini kule mpelasonto, ngiyaxolisa ngokungathumeli ngisho inothi noma okubili. Sibe nenkinga emndenini ekhaya eyanginaka kakhulu futhi yangipha amandla. Akunandaba ukuthi ibhulogi yami ibaluleke kangakanani nokugcina isithunzi sami online, akukho okubaluleke njengomndeni.
Ngibonga kakhulu abangane bami, abaku-inthanethi nabangaxhunyiwe ku-inthanethi, ngalezi zikhathi ezinzima. Benginama-imeyili ambalwa kule mpelasonto ngibuza nje ukuthi ngabe konke kuhamba kahle. (Akulungile okwamanje, kepha izofika lapho.)
Ukukhuluma ngabangane, lokhu okuthunyelwe engiqonde ukukwenza isikhashana. Umngane omuhle nomuntu esikanye naye Ubhontshisi Fiend, UJason Bean (abukho ubuhlobo) wabhala iposi Be Douglas KarrUmngani.
Konke lokhu kuqale ngesikhathi uJason ebeka ikhamera yakhe ukuthatha isithombe esinesikhathi sobabili. Ngihlekise ngime lapho ngengalo yami kuye wase ethatha isithombe. Sibe sesinombono wokuthi senze okuthunyelwe bese abanye 'bagcwalisa' futhi babe ngumngani wami. Nansi impendulo esiyitholile!
Angimthinti ngempela ekhanda uJohn Uhri, bengizomcindezela asuse ikhawunta nekhamera ikubambe!
Ngihlangane noLorraine nomyeni wakhe amahlandla ambalwa emicimbini yesifunda futhi sijabulele ukuba ndawonye komunye nomunye (okungenani ngithemba ukuthi bakujabulele okwami!). Ngicabanga ukuthi sifana kakhulu nomndeni ohlanganisiwe!
Ibhulogi kaMichelle yintsha kimi - kepha sengivele ngithokozela iprozi lakhe elicabangelayo nelomuntu siqu. Ngiyethemba singahlangana noMichelle futhi siphuze leyo khofi!
I-podcaster yendawo, kanye nosomabhizinisi womculo owengeziwe, UDarrin Snider waze wathatha isikhathi ukungena esenzweni! Ngahlangana noDarrin ku- I-ExactTarget futhi ngiyijabulele kakhulu ingxoxo yethu. Ngiyethemba ukuwela izindlela futhi maduze!
Usengangena ebumnandini! Nayi ifayili le- isithombe sokuqala ongakwazi ukuzenzela i-Photoshop! Abangane abaningi, baba ngcono!
Tags: ukudalulwaftcumklami we-graphicngokungemthethozomthethoingqungquthela yezokumakethaamathiphu we-slideshareukubukwa
Ikhadi Lebhizinisi le-Wordle!
I-Starbucks: Ukwehla kwamandla emali nokuncipha komkhiqizo
Aug 4, 2008 ku-9: 46 AM
Ukuqagela lokho kusho ukuthi awutholanga leyo plug-in epholile yakwaGoogle eyakhelwe ngaleso sikhathi. Ithemba izinto ziyashelela ngokwengeziwe njengoba usuku luqhubeka. Uqinisile impela kepha, akukho okubaluleke ukudlula umndeni wami. Inselelo ukuthi ungalinganisela kanjani ukuchitha isikhathi nomndeni nokuchitha isikhathi wenza lezo zinto onazo ukuze uzinakekele futhi uzinakekele nazo. Nginesiqiniseko sokuthi sizokubona eThe Bean Cup kungekudala.
Aug 4, 2008 ngo-2: 34 PM
Ngisafuna ukwakha leyo plugin!
Siyabonga ngokuxhaswa (nobungane) uJason! Ngizokubona eThe Bean Cup namhlanje ebusuku!